भोली निर्वाचित भएर आउन सक्दिन भन्नेहरु चुनावको विरोधमा छन् : आनन्द बिष्ट – Durbin Nepal News
दूरबिन नेपाल २७ माघ २०७६, सोमबार १४:३०
नेपाली काँग्रेसको विदेश स्थित भातृ संगठन जनसम्पर्क समिति अमेरिकाले निर्वाचनको मिति घोषणा सँगै एउटा समुह सो निर्णयको बर्खिलापमा गएको छ । जनसम्पर्क समिति अमेरिकाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने अधिवेशन अप्रिल ११ र १२ मा गर्ने निर्णय गर्दै स्वीकृतिका लागि पार्टीमा सिफारिस गरेको छ । जनसम्पर्कको अधिवेशन तीन बर्ष पहिला नै हुनु पर्ने हो । यस अघि पनि जनसम्पर्क समितिले निर्वाचनको प्रक्रिया शुरु गर्न लागेको थियो । तर पूर्व संयोजक बिष्णु सुवेदी पक्षको जोडबल पछि पार्टीले तत्कालका लागि अधिवेशन र निर्वाचन सम्वन्धी कुनै पनि गतिविधि नगर्नु भन्दै पत्र पठायो ।
नेपाली काँग्रेसले गत कार्तिकमा म्याद गुज्रिएका आफ्नै सबै निकायलाई ६ महिना भित्र निर्वाचन गराउन परिपत्र जारी गरेको छ । सोही अनुसार जनसम्पर्क समिति अमेरिकाले पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो । तर पूर्व संयोजक सुवेदी पक्ष पार्टीको विधान विपरित अधिवेशन हुन लागेको भन्दै यस पटक पनि विरोधमा रहेको छ । यसै बिषयमा दूरबिन नेपालले नेपाली काँग्रेसका आमन्त्रित केन्द्रिय सदस्य तथा नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका सभापति आनन्द बिष्ट सँग गरेको कुराकारीको अ‌ंश ।
लामो समय पछि चुनावको मिति तोक्दै पार्टीमा सहमतिका लागि सिफरिस त गर्नु भयो तर पनि एक पक्षले त असहमति जनाएको छ, चुनाव कसरी गराउदै हुनुहुन्छ ?
नेपालमा पार्टीको विधान र अमेरिकामा दर्ता भएको संस्थाको आफ्नो विधान बिचमा सहजिकरण गर्नु पर्ने, अमेरिकी नागरिकता लिइसकेका साथीहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा जटिलता थियो, त्यसका लागि सहजिकरण गरिदिन पर्यो भनेर पार्टीलाई हामीले अनुरोध गरेका थियौ, नेपालमा पनि पार्टीको आफ्नै व्यस्थता, आन्तरिक खिचलोले गर्दा हो कि के हो त्यसमा फोकस नपुगेको जस्तो लाग्यो । र हामीले नेताहरु सँग कुराकानी हुदाँ उहाँहरुले तपाईहरुलाई ६ महिना भित्र अभिवेशन गर्नु भनेर चिठ्ठि पठाइसकेको छ तपाईहरुलाई आफ्नो लागि के कसरी सहजिकरण हुन्छ त्यसै अनुसार काम गर्नुस, पार्टीको अर्को चिठ्ठि आवश्यक पर्दैन भन्नु भएको हुदाँ कार्यसमितिको बैठक बोलाएर अधिवेशनको निर्णय गरेको हो । हाम्रो सहजिकरण गर्नु पर्ने विषय के हो भने अमेरिकाको राहदानी लिइसकेका साथिहरुलाई कसरी सम्मिलित गर्ने भन्ने छ । एउटा कुरा के प्रस्ट हो भने नेपाली काँग्रेसको क्रियाशिल सदस्यका लागि नेपाली नागरिक नै हुनु पर्दछ त्यसमा दुविधा छैन । तर यहाँको जनसम्पर्कको सदस्यता वितरण गर्नका लागि रोकावट हुनु हुदैन भन्ने हो, त्यसमा व्यवारिकता हेरर गर्नु भन्ने संकेत आएको हुनाले हामीले अधिवेशन प्रक्रिया शुरु गरेका हौ ।
भने पछि अझै पनि नागरिकताकै विवाद हो ।
पहिला पनि अमेरिकी नागरिकले नेपाली काँग्रेसको क्रियाशिल सदस्यता लिन पाउनु पर्छ भन्ने त थिएन । तर अहिले तोकेरै आयो । यो जायज पनि हो नेपालको संविधान भन्दा बाहिर गएर पार्टीले काम गर्ने भन्ने कुरा पनि आउदैन । नेपाली काँग्रेसको क्रियाशिल सदस्यता नेपाली नागरिक नै हुनु पर्यो त्यसमा दुई म त छैन । तर अहिले हामीले जनसम्पर्क समितिको निर्वाचन गर्न लागेका छौ भने पछि त यो संस्थाको साधरण सदस्यता वितरण त गर्नु पर्यो । त्यही कुरामा केही साथीहरुले त्यसरी सदस्यता दिनु हुँदैन सोझै क्रियाशिल सदस्यता दिनु पर्दछ भन्नु भएको हो । पार्टीले पनि अधिवेशन गर्दा सोझै क्रियाशिल सदस्य त दिदैन पहिला साधरण सदस्यता नै दिने हो । यहाँ पनि यही हो । के आधारमा सोझै क्रियाशिल सदस्यता दिने ? पहिला जनसम्पर्क समितिको सदस्यता लिनु पर्यो । अहिले विधानमा पनि एक बर्ष जनसम्पर्क समितिको सदस्यता लिएको व्यक्ति मात्र क्रियाशिल सदस्य हुन पाउने भन्ने छ ।
नेपाली काँग्रेसको विधानले जनसम्पर्क समितिको सदस्य हुन नेपली नागरिकता अनिवार्य गरेको छ नी त ।
साधरण सदस्यका लागि होइन । क्रियाशिल सदस्यताको लागि हो त्यस्तो व्यवस्था । अमेरिकाको कानुन अनुसार दर्ता गरेको संस्थाको सदस्यता वितरणमा नेपाली नागरिकता अनिवार्य हुनु पर्छ भनेर पार्टी त बोल्दैन नी । पार्टीले बोल्ने भनेको क्रियाशिल सदस्यमा मात्र हो ।
यो पटकको अधिवेशन कसरी हुन्छ त ? क्रियाशिल सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य कसरी छान्नु हुन्छ ?
अहिले पार्टी सँगको समन्वयन के भने पहिला यहाँको साधरण सदस्यता वितरण गरेर च्याप्टरको अधिवेशन गर्छौ । त्यो सँग सँगै क्रियाशिल सदस्यको लागि पनि दर्खास्त आह्वान गर्छौ । जो जो साथीहरु विधान अनुसार योग्य छन् उहाँहरुलाई हामी पार्टीलाई पठाउछौ । एउटा जटिलता चै कहाँ छ भने यदी जनसम्पर्क समितिको केन्द्रिय सभापति नेपाली नागरिक भएकै हुनु पर्छ भन्ने पार्टीले निर्देशन दियो भने त्यो नमान्ने भन्ने हुदैन । तर हाम्रो व्यवहारिक कठिनाइ के हो भने विदेशमा ठूलो संख्यामा रहेका दाजुभाइहरु जो काँग्रेस सँग भावनात्मक सम्वन्ध राख्दै आउनु भएको छ, उहाँहरुलाई जनसम्पर्कको सदस्यता नै लिन पाउनु हुन्न भनेर कसरी भन्ने ? विदेशमा रहेका साथीहरु त्यसरी सदस्यबाट बन्चित रहे भने पार्टी प्रति पनि नैरस्यता हुन्छ र पार्टी सँग दुरी पनि बढ्छ । भोलीका दिन उहाँहरुबाट पार्टीलाई हुने सहयोग निरन्तरता होस भन्ने कुरा पनि छ । त्यसलाई कसरी सहजि करण गर्ने भन्ने पनि छ ।
पार्टीले स्पष्ट निर्देशन नदिदाँ पनि तपाईहरुलाई अप्ठेरो परेको हो ?
अवश्य पनि । यो अलि अन्यौता पनि छ । तपाईहरु आफ्नो व्यवहारिक हिसावले गर्नुस पनि भन्ने । केही साथिहरु के चाहना राख्दै हुनुहुन्छ भने यो बृहत संगठनलाई खुम्चाएर केही व्यक्ति सय ढेडसय जनामा ल्याएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने अरु जे सुकै होस भन्ने प्रवृतिले अहिले बजार तातेको छ । यसले के गर्छ भने अब कसरी संगठन गर्ने भन्ने हुनु पर्नेमा च्याप्टर किन चाहियो भन्ने छन् । च्याप्टरलाई त्यसै मारिदिने ? यो प्रवृति के हो भने भोली म साथीहरुबाट निर्वाचित भएर आउन सक्दिन, संकुचित रुपमा व्याख्या गरेर सानो घेरामा जनसम्पर्क समितिलाई राख्ने भन्ने देखिए । अरु देशको जस्तो पनि होइन । पार्टीले एउटा समुहलाई मान्यता दिएको छ त्यही हो जनसम्पर्क भन्ने । यहाँ त कानुन अनुसार दर्ता भएको संस्था हो । हरेक आर्थिक कारोवारका लागि पनि संस्था दर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । सदस्यता वितरणमा शुल्क लिन पनि त संस्था दर्ता गर्नु पर्यो । कठिनाइहरु छन् । मलाई पनि लागेको के भने त्यति सजिलो छैन, सबै कुरा यस्तै हो भन्नका लागि, पार्टीले गरेका कुरालाई अब मुल्याङ्कन गर्ने, मेरो त्यो हैसियत पनि छैन् । पहिला पनि व्यवहारिक रुपमा नै गरेको हो विदेशको । कलिकति जटिलताकै विषय छ । क्रियाशिल सदस्यता वितरण गर्ने सवालमा पार्टीले समझदारिमा काम गर्नुस भन्ने पनि छ । हामीले धेरै भन्दा धेरै साथिहरुको भावनालाई समेट्ने कि एक दुई जनाको भावनालाई समेट्ने ?
विधिको कुरामा के भन्नु हुन्छ ।
विधिको बारेमा उहाँहरुलाई जति चिन्ता छ त्यो भन्दा बढी चिन्ता त मलाई छ । म त पार्टीको केन्द्रिय सदस्य पनि हो । विधान विपरित काम त म गर्दिन । व्यवहारिक कुरालाई सम्वोधन गर्नु पर्छ भन्ने पार्टीको पनि छ । म त्यसै अनुसार काम गरि रहेको छु भोली पार्टीले हुन्न भनेर चिठ्ठि पठायो भने मैले नमान्ने भनेर हुन्छ र ?
केन्द्रिय कमिटि र च्याप्टरहरु बीचमा पनि बैठक गराउनु भयो भन्ने छ के के कुरा भए ?
च्याप्टरका साथीहरु सबै उत्साहित छन् । उहाँहरु अधिवेशन गर्नु पर्छ भन्नेमा नै हुनुहुन्छ । बाहिर रहेका साथीहरुलाई कसरी समेट्न सकिन्छ समेटौ भन्ने नै छ । अधिवेशनको विकल्व छैन अब अधिवेन रोक्न हुदैन भन्ने नै छ ।
यो पनि हेर्नु होस
२७ माघ २०७६, सोमबार १४:३० मा प्रकाशित